သဈလုံးကို ကုဗပတှကျနညျး….သဈတနျတှကျနညျး….သဈ ၁ တနျ ဈေးနှုနျးတှကျနညျး…. – Nyi Ma Lay
သဈလုံးကို ကုဗပတှကျနညျး….သဈတနျတှကျနညျး….သဈ ၁ တနျ ဈေးနှုနျးတှကျနညျး….
သဈလုံးကို ကုဗပနှေငျ့ တနျဖှဲ.ရာတှငျ လကျမကိုတညျ ၄ နှငျ့စား၊ ရလဒျသညျ ဒုဗွကျလကျမဖွဈသညျ။ ဒုနှငျ့ဗွကျကိုမွှောကျ၊ သဈလုံးအလြားနှငျ့ ဆကျမွှောကျရသော အဖွကေိုတညျ၍ ၇၂၀၀ နှငျ့စားလြှငျ အဖွသေညျ သဈတနျရ၍ ၁၄၄ နှငျ့ စားလြှငျ ကုဗပရေသညျ။
ဥပမာ – သဈလုံးပတျ ၆၀ လကျမ ၊ အရှညျ ၃၂ ပရှေိသော သဈလုံးကို တနျဖှဲ.လိုလြှငျ
၆၀/၄ = ၁၅ ဒုနှငျ့ဗွကျလကျမ
(၁၅ x ၁၅ x ၃၂) / ၇၂၀၀ = ၇၂၀၀/၇၂၀၀ = ၁ တနျ
(၁၅ x ၁၅ x ၃၂) / ၁၄၄ = ၇၂၀၀/၁၄၄ = ၅၀ ကုဗပေ
၅၀ ကုဗပေ = ၁ တနျ
(သဈ ၁ တနျ = ၁” x ၁” ပတျလညျ ၇၂၀၀ ပေ)
သိလိုသော သဈအရှယျအစား၏ ဒုနှငျ့ဗွကျကို မွှောကျ၍ရသော ရလဒျနှငျ့ ၇၂၀၀ ကိုစားရသောအဖွသေညျသဈတဈတနျ၏ ပအေရှညျဖွဈသညျ။
၄ x ၂ = သဈတဈတနျရှိပရှေညျကို သိလိုသျော
၄ x ၂ = ၈
၇၂၀၀ / ၈ = ၉၀၀ ပေ
( ၄ x ၂ ) သဈတဈတနျမှာရှိသောပအေရှညျ = ၉၀၀ ပေ
သဈခှဲသားမြားကို ကုဗပနှေငျ့ တနျဖှဲ.ရာတှငျ တှကျလိုသညျ့သဈခှဲသား၏ ဗွကျနှငျ့ဒုကို မွှောကျပွီးနောကျသဈတဈတနျရှိ ၅၀ ကုဗပနှေငျ့ ထပျမွှောကျပွီးလြှငျ ၇၂၀၀ နှငျ့စားခွငျးဖွငျ့ ကုဗပမြေားကိုရရှိမညျ။ အကွှငျးရှိလြှငျမပွတျမခငျြး (သုည) ထိုး၍ ဆကျစားခွငျးဖွငျ့ ဒသမမြားကို ရရှိမညျ။
၄ x ၂ သဈခှဲသား ပေ ၉၀၀ ကို ကုဗပေ မညျမြှ ရှိကွောငျး တှကျခကျြရာတှငျ
(၄ x ၂ x ၉၀၀ x ၅၀) / ၇၂၀၀ = ၅၀ ကုဗပေ
သစ်လုံးကို ကုဗပနှင့် တန်ဖွဲ့ရာတွင် လက်မကိုတည် ၄ နှင့်စား ရလဒ်သည် အဒု ဗြက် လက်မ ဖြစ်ပါသည် ဒုနှင့် ဗြက် ကိုမြှောက် သစ်လုံ အလျား နှင့် ဆက်မြှောက် ရသောအဖြေ ကိုတည်၍ ၇၂၀၀ နှင့် စားလျှင် အဖြေသည် သစ်တန်ရ၍ ၁၄၄ နှင့်စားလျှင် ကုဗပေ ရပါသည်။
ဥပမာ…….သစ်လုံပတ် ၆၀လက်မ အရှည် ၃၂ပေ ရှိသောသစ်လုံးကို တန်ဖွဲ့လိုလျှင်
144 144. = 50ကုဗပေ
၅၀ ကုဗပေ = ၁ တန်
သစ်တန်တွက်နည်း ( သစ် ၁ တန် = ၁” × ၁” ပတ်လည် ၇၂၀၀’ပေ)
သိလိုသော သစ်အရွယ်အစား ဒု နှင့် ဗြက် ကိုမြှောက်၍ ရသော ရလဒ်နှင့် ၇၂၀၀ ကို စားရသော အဖြေသည် သစ် ၁ တန်၏ဖြေဖြစ်သည်။ တွက်နည်း
၄”×၂” = သစ်တစ်တန် ရှိပေရှည် ကိုသိလိုလျှင်
၄”×၂” = ၈
၇၂၀၀ = ၉ ၀၀’ပေ
(၄”×၂”) သစ် ၁တန်၌ရှိသော ပေရှည် =၉၀၀ပေ
ဗျက် ၄”×၂” ပေရှည် ၂၀ ပေ ၊ ချောင်းရေ ၃၀ ဆိုပါစို့ ဗျက်ရယ် ၊ ဒုရယ် ၊ ပေရှည် ရယ် ၊ ချောင်းရေရယ်မြှောက် ၁၄၄ နဲ့စားရပါမည်။ ရတဲ့အဖြေဟာ ကုဗပေ ပဲရှိသေး၍ သစ် ၁ တန်လျှင် ၅၀ ကုဗပေ ရှိ၍ ၅၀ ဖြင့်စားလျှင် တန်ရလာပါမည်။
ဗျက် × ဒု × ပေရှည် × အချောင်းရေ
၄”×၂”×၂၀’×၃၀÷၁၄၄= ၃၃.၃၃ ကုဗပေ
၃၃.၃၃ ကုဗပ = ၀.၆၆၆ တန်
၅၀ ကုဗပေ. ဆိုပါစို့ =၀.၆၇တန်
ဥပမာ… သစ် ၁ တန် ၆၅၀,၀၀၀ ဈေးဖြင့် ၄”×၂” လေးနှစ် ၁၈ ပေ တစ်ချောင်းကိုတွက်ကြည့်မယ် ဈေးနှုန်း ကိုတည် ဒသမ သုညသုည နှစ်ငါးဖြစ် မြှောက်(၆၅၀,၀၀၀×.၀၀၂၅) ရလဒ်ကိုသစ်ချောင်း၏ ဒု×ဗျက် (၄”×၂”) ရလဒ်ဖြင့်ပြန် မြှောက်လိုက်ပါ။
ဒါဆို ၄”×၂” လေးနှစ် ၁၈ပေ တစ်ချောင်း၏ တန်ဘိုးရမည်။
၄ × ၂ = × ၈
လေးနှစ် ၁ ချောင်း တန်ဘိုး = ၁၃,၀၀၀ ks ဖြစ်သည်။ မည်သည့် ဒု ဗျက် မည်သည့် ဈေးနှုန်း မဆိုတွက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အားလုံဆင်ပြေကြမယ်ထင်တာပဲ့။ Credit:
Previous post စီးပှားဖွဈလုပျကိုငျလိုသူမြား အတှကျ တောငျပို့မှို ဖောကျနညျး အကွောငျး သိကောငျးစရာ (လိုအပျသူမြား ကူးယူနိုငျပါတယျ လကျတှကေ့ကြ လလေ့ာ စိုကျပြိုးသူရဲ့ တငျပွခကျြကိုလဲ ကြေးဇူး အထူးတငျပါတယျ )
Next post ယနခေ့တျေ အမြိုးသမီးလေးမြား မှတျသားလိုကျနာသငျ့တဲ့ မိနျးမမွတျအင်ျဂါ ၉ ပါး